Sina Batching Mixer Spare Parts fanamboarana sy orinasa | Jusheng
Ny vibratory dia misafidy fitaovana an'izao tontolo izao, insulation Class F, famehezana maharitra, miaraka amina fiantohana premium, famolavolana vatana matanjaka. Izahay indrindra no misafidyOLI-WOLONG na DKTEC vibratory hiteraka ny hovitrovitra any amin'ny fitoeram-pako
2. Rafitra pneumatika
Izahay indrindra no misafidy AIRTAC varingarin'ny pneumatika ary koa ny valizy solenoid,
SC100X200 & SAU100X200 no tena ampiasaina. Varingarina karazana SC dia an'ny vokatra mahazatra AIRTAC
Temperature miasa ℃
Ny varingarina dia hifanaraka amin'ny fototra mifandraika, mpampitohy ary sensor mba hifehezana ny hafainganan'ny famahanana ny milina famonoana ary hampitombo ny fahamarinan'ny fandanjana. Ny boaty fanaraha-maso ATC3006-DC24V mifandraika amin'izany, misy valizy valizy solenoid marobe 4V310, sivana BFC4000, fantson-drivotra Ary fampanginana sns.
AMCELL, CHIMEI no marika lehibe anay. Ho an'ny mixer batching, safidio matetika ny sela mitondra entana S. 4units miaraka amin'ny fahafaha 3000kg, napetraka ao amin'ny hoppera milanja mba hahazoana antoka fa marina. Raha ny filan'ny mpanjifa dia afaka manome mari-pahaizana mavesatra PT650D koa izahay, mba ho hitan'ny mpanjifa am-pahalalana ny angona mavesatra.
Rafitra fanangonam-bokatra mandeha ho azy, Concrete Mixer Spare Parts, Rafitra fanangonam-bokatra mitambatra, Fitaovana fampiroboroboana zezika mandeha ho azy, Masinina mitambatra mandeha ho azy, Rafitra fanangonana mitambatra,